जनमुक्ति सेनालाई प्रचण्डको बेवास्ता, ओलीको वाचा त्यसैले हामी उता लाग्यौँ : लीलबहादुर थापा
पूर्वजनमुक्ति सेनासँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा छलफल गरेका छन् । ओलीले उनीहरूका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिँदै जनाउँदै समाहित हुन आग्रह गरेका छन् । आफूलाई अग्रगमनको पक्षधर भन्न रुचाउने पूर्वजनमुक्ति सेना ओलीको कदम प्रतिगमानकारी भएको व्याख्या भइरहँदा ओली समूहमा किन लाग्यो, आफ्नो सुप्रिम कमाण्डर रहेका प्रचण्डको साथ छोड्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूलाई आयो र प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई दिएका आश्वासन पूरा हुने संकेत के-के हुन् ? यीनै विषयमा पूर्वमाओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य रहेका लीलबहादुर थापा मगरसँग शिशिर ढकालले गरेको संवाद
पूर्वजनमुक्ति सेनासँग शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छलफल गरेको थियो, के विषयमा कुराकानी भयो ?
शनिबार हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग जनमुक्ति सेनाको हकहितका विषयमा कुराकानी गर्‍यौँ । हामीले जनमुक्ति सेनालाई परिचयपत्र दिनुपर्ने माग अघि सार्‍यौँ । जनयुद्धमा घाइते भएकाहरूको उपचार गर्ने सरकारी निर्णयको स्वाग गर्‍यौँ । शहीद परिवारलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न भन्यौँ । प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता ल्याउन पहल गरिरहेकोप्रति हामीले समर्थन जनायौँ । पूर्वजनमुक्ति सेनालाई सीमारक्षाका लागि सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गराउन हामीले प्रस्ताव राखेका छौँ । हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ ।
तपाईंहरू नेकपा ओली समूहमा समाहित हुनुभएको हो ?
पार्टी अहिले पनि औपचारिक विभाजन भएको छैन । त्यसैले त्यता गएर छलफल गर्नेबित्तिकै उतै गयो भनेर भन्नुहुँदैन । हामी नेकपाभित्रै छौँ । तर प्रधानमन्त्री ओली शहीद परिवारलाई रोजगारी र हाम्रा माग सम्बोधनका प्रतिबद्धता जनाउनुभएकाले हाम्रो समूह त्यतै सामेल हुन्छ । उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोगको काम छिट्टै सक्ने र युद्धपीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभएको छ ।
जनमुक्ति सेना आफूलाई अग्रमनको पक्षभर भन्न रुचाउँछ । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधसभा विघटनलाई प्रतगिमन भनेर व्याख्या भइरहेका बेला तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुको कारण के हो ?
जनयुद्धका घाइतेहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । जनमुक्ति सेनालाई तालिम र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ । शहीद परिवारलाई 'सेटल' गर्ने उहाँको योजना छ । अहिलेको कदम भनेको प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने काम भएपछि चालिएको हो । पदको लडाइँका कारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै फाल्ने कदम चाल्न खोजिएको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि हुने भनेको सत्ताको खेल नै हो । बरु चुनावमा गएर जनताको ताजा जनादेशमा जसले बढी मतप्राप्त गर्छ उसले नै सत्ता सञ्चालन गरे भइगोनी । हाम्रो माग भनेको शान्ति प्रकियाका काम पूरा गर्ने र पूर्वजनमुक्ति सेनाको सम्मानजनक अवस्था सिर्जना गर्ने नै हो । यो मागमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धा आएको छ ।
तपाईंहरूको सुप्रिम कमाण्डर त प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँको साथ छोड्नुपर्ने कारण के हो ?
हामीले प्रचण्डलाई छाडेका होइनौँ । प्रचण्डले जनमुक्ति सेनालाई छाड्नुभएको हो । पटक-पटक सत्तामा पुग्दासमेत उहाँले हाम्रो माग सम्बोधनमा ध्यान दिनुभएन । प्रचण्ड आफैँले ओलीलाई अध्यक्ष मान्नुभएको थियो । जनमुक्ति सेनाले उहाँलाई अध्यक्ष मान्दा आपत्ति मान्नुपर्ने कारण नै छैन नि ।
सत्तामा रहँदा तपाईंहरूकै सुप्रिम कमाण्डरबाट पूरा नभएका माग प्रधानमन्त्री ओलीबाट चाहिँ पूरा होला त ?
हामीले योबीचमा धेरै थरिका नेता व्यहोर्‍यौँ । आश्वासन धेरै दिने तर पूरा केही पनि नगर्ने । अहिले नेकपा ओलीइतर समूहमा धेरै गुट छन् तर ओली समूहमा उहाँ मात्रै नेता हो । उहाँले बोलेको कुरा अलिकति भए पनि पूरा गर्नुहुन्छ । हाम्रो माग सम्बोधन गर्न उहाँले केही कदम पनि चाल्नुभएको र प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएकाले हामी उहाँप्रति विश्वस्त छौँ । जहाँ रहे पनि पार्टीमार्फत केही न केही योगदान समाज र देशलाई पुर्‍याउने काम हामी गर्छौँ । अब हामी ओली समूहमा रहेर योगदान पुर्‍याउन चाहन्छौँ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ १०, २०७७, २०:०९:००